ओली भन्छन्: प्रचण्डलाई अध्यक्ष नै चाहिएको हो भने एकता किन गर्नुपर्‍यो ? (अडियोसहित) — Imandarmedia.com
ओली भन्छन्: प्रचण्डलाई अध्यक्ष नै चाहिएको हो भने एकता किन गर्नुपर्‍यो ? (अडियोसहित)
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वाम गठबन्धनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएका छन । पत्रकार निरजराज जोशीसँग कुरा गर्दै ओलीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कार्यकारी प्रमुख नै प्रधानमन्त्री हुने उनले बताएका छन् ।
पार्टी अध्यक्षको प्रश्न महाधिवेशन वा एकीकरणमा मात्र आउने भन्दै ओलीले अहिले सरकार गठनको क्रममा पार्टी अध्यक्षको प्रश्न सान्दर्भिक नै नहुने उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखजस्ता पदहरु पार्टीको अध्यक्षसँग नजोडिने उनले प्रष्ट पारेका छन् ।